Warbixinta laga diyaariyey Kiiska Dilka Guddoomiyihii Hodon oo lagu wareejiyey Maxkamadda Milateriga - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Guddi ay xukuumaddu xil gaarsiinta u sameysay baaritaanka Dilkii guddoomiyihii degmada Hodan ee Gobolka Banaadir Cabdixakiin C/raxmaan Ciise (Dhegajuun) ayaa warbixinta kiiska lagu wareejiyey xafiiska Xeer ilaalinta Maxkamadda Ciidamada.
Guddiga oo uu guddoomiye u ahaa Wasiirka Anmiga ayaa soo gabagabeeyay baarista kiiskan oo socday ilaa 28-kii Janaayo 2021, waxaana kiiskan loo xiray taliyeyaasha saldhigyada Hodon iyo Waaberi iyo askar ku dhow 10 oo ay ka mid yihin ilaaladooda.
Dhinaca kale Wasiirka Amniga Xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xundubeey Jimcaale ayaa sheegay Galka Baarista dilkii Guddoomiyihii degmada Hodan ku wareejiyey xeer ilaaliyaha, ayna u gudubtay Maxkamadda ku shaqada leh, ayna filayaan in kasoo baxaan cadaalad.
Waxaa kulanka ku sugnaa Qoyska Marxuumka oo uu wehliyo guddoomiye ku xigeenka G/Banaadir Cali Yare oo qaraabo la ah, iyagoo goobta laga sheegay in Ra’iisal wasaaraha xilgaarsiinta uu saameyn ku lahaa guddiga baaritaanka uu madax u ahaa.
Waxaa hore u soo baxay warar hordhac ah oo lagu sheegay in dilku u dhacay si Shil ah, lana sii dayey taliyaha saldhigga Waaberi oo kiiska la sheegayn inaan caddeyn loo helin ku lug lahaanshihiisa.
Odayaasha Qoyska uu kasoo jeedo Marxuum C/xakiin Dhegajuun ayaa digniin kulul soo saaray Khamiistii, iyagoo codsaday in cadaalad degeg loo helo kiiskan oo ay tuhunsan yihiin in la meermeerinayo.
Previous articleFarmaajo oo Dhambaal u diray Madaxweynaha dib loo doortay ee Ismaaciil Cumar Geelle
Next articleGanacsato Qeylo-dhaan kasoo saaray Qaadka Itoobiya laga keeno oo loo xiray Nin la dhashay Farmaajo